Shakkiifii gaafiileen hedduun waayee dhaabbilee siyaasaa oromoo ta'e jira!! Kichuu
HomeAfaan OromooNewsShakkiifii gaafiileen hedduun waayee dhaabbilee siyaasaa oromoo ta’e jira!!
Waajjira Adda Bilisummaa Oromoo.
Kan si gammachiise Abdi Teyib Wako
Shakkiifii gaafiileen hedduun waayee dhaabbilee siyaasaa oromoo ta’e jira.
dhaabnii oromoof oromiyaa keessa socho’aa jiran ABO , KFO ,fi PBO ti..
Paartileen sadeenuu, Wal irratti otuu hin taane waliin qabsaahaa jiru.
Filmaata bara 2020 deemuuf paartileen sadan Gama hundaan guutuu oromiyaa keessatti socho’uun erga dorgomanii boodatti , yaadaafii kaayyoo paartilee sadanuu qabatanii akka oromootti akka karoora GAADDISA HOOGGANSA OROMOOtti, PAARLAAMAA biyyattiitti kan galaniidha.
Mana maree bakka bu’ootaa keessatti OROMOOF oromiyaaf , sagalee tokko, dhageesiifatuun Saba kanaaf furmaata bu’uuraa ni kaayu.
Dhaabbileen oromoo hunduu dhaaba tokko jalattii deebi’uu qaban yaadnii jedhu dhugaa fii gaafii sirrii ta’us , Gama biratiin yoo laallee Wal faalleesa.
Oromoon dhaaba tokko qofa qaba haa jennutii. Gaafiiwwan armaan gadiif deebii akkamii laattuu..?
1ffaa, Tokkicha irraa maal filannaa…?
2ffaa, yaadaafii fedhiin uummata oromoo miliyeena 60 guutuun , bilisummaa ta’us karaa tokkoo qofaan qabsoofnaa, dhaaba Tokkicha qofaatu bilisa nu baasaa jedhee yaadaa..?
3ffaa. Dhaaba tokko qofa qabna yoo jedhamee, Tokkicha San diinnii ,MILIYEENA 100 fii sanii oliin jijiree gufachiisuu hin danda’uu…?
4ffaa, dhaabnii tokkoo qofti morkatoota malee rakkiinna Saba kanaa hangam argee , hangamis furuu danda’aa..?
Oromoon yoo xiqqaate dhaaba 3 qabaachuun isaa baayyee gaariidha. Sadanuu gaafii Saba kanaa deebiisuuf irratti Wal dorgomu,. Dorgommiifii Sochii ariitiin isaan taasiisaniin gaafiin Saba oromoo haala gaariin deebi’aafii deema.
Kana malees dhaabnii tokkoo yoo kan mallaqaas ta’ee bu’aa garagaraatiin dantaa saba kanaa gatuun guffachiisu ta’e , kan lammaafaaf kan sadaffaattuu arga, kanaaf dantaan sabaa hin gurguramtus karaarrayis hin maqxu.
Kanaaf oromoon hardha dhaabbilee sadiihin ABO, KFO, PBO, oromiyaa keessattii Sochii garagaraa taasiisaa jiru. Sadeenuu BILISUMMAA Saba kanaaf akka ta’e firaaf diinniis kan hubatee beekuudha.
Kanaaf dubbichi Wal cabsuuf Wal irratti duuluuf otuu hin taane, Saba kana BILISUMMAA dhugaa goonfachiisuuf , Wal ta’iinsaaf karoora tokkoon kan imalaa jiran akka ta’e qaamoota ol aanaa ,KOREE gaaddisa hooggansaa irraa dhageenyee jirra.
Hundinuu tokko jabeefadhaa……
Namootni hedduun karaa keessaa dhimma barjaa (taappellaa) maqaa waajjira ABOtiin banamee kana irratti nagaafataa jirtanii fi kanneen dhimmi kun gaaffii isinitti ta’e hundaaf.
Gabaabinaan kun waajjira ABO kan godina baalee baalee magaalaa roobeetii miti.
Kanneen maqaa ABOtiin waggaa dheeraaf daldalanii ummata burjaajessaa turantu ammas erga boordiin filannoo xoophiyaa salphinaan isaan gaggeessellee ciisa dadhabanii dhama’aa jiru.
Sababni isaan kana godhaniif haa hogganni ABO seeratti isaan himtee isaan waliin atakaroo keessa seenee yeroosaa gubuufi.
Haa miseensonni ABO Magaalaa roobee isaan waliin walitti dubbatanii yeroo isaanii hojii dhaabanii isaan waliin gubaniifi.
Waan kana immoo qaama mootummaa waliin walii galanii waan godhan malee waan kophaasaanii godhan hin fakkaatu.
Kanas ta’ee sana waajjirri ABO akka godina baaleetti yeroo dhiyootti godina hanga gandaatti kan saaqamu ta’a.
Isa kanaaf koreen aanota hundatti dhaabbatee hojiitti jiru.
Qabatamaan kan dhiyootti waliin agarru ta’a.
Ammaaf miseensonni ABO godina baalee jara kisaaraan salphina isaan mudate kana waliin atakaroo biraa keessa galuu dhiifnee dirqama keenya kan sabnis dhaabnis nurraa eegu haa baanuun jedha.
ABO Oromiyaarraa dhiibdee EZEMA/G7/ Oromiyaa keessa gulufsiisaa jirti OPDO’n.
EPP’n maqaa biraa EZEMA baafatee deemaa jira.
Dhaamsa WBO Lixaatiif:
(07/12/2019) Mootummaan abbaa irree kololneel Abiy har’allee humna isaa jabeefachuuf meeshaa waraanaa godinaalee Wallaggaatti guuraa jira.
Sa’aatii muraasa dura gara sa’aatii 4:00(wb) konkolaataan waraanaa sharaadhaan haguugame patirooliin eegamee darbaa jira.
Konkolaataa meeshaa fe’u Volvoo jedhamu wal harkisu, (remorkee qabu) lama, (2) konkolaataa 3F dhaan duubaa fi fuulduraan eegameeti deemaa jira. Konkolaataa gurguddaa sanarras humni waraanaa dabalataan namoonni 12, meeshaa gurguddaa kan qabatanii konkolaattota mara irra taa’aniiru.
Konkolaataa 3F duraa fi booda jirus meeshaa gurguddaa akka “breil” jedhamu irratti camadatanii hordofaa jiru.
Konkolaataan kun aanaa Waayyuu Xuqaa, naannoo magaalaa Guutee jedhamte beekamtu qaxxaamuree gara Naqamteetti kan darbaa ture yeroo ta’u meeshaa waraanaa ykn raashina qabatee akka deemaa jirutu shakkama.
Jaarmiyooliin siyaasaa maqaa Oromootiin jiran xixiqqoon ABO jalatti walitti qabamuun sababaa hedduu jira!
1. ABOn dhaaba Oromoo hundaati; waggaa 50n darbaniif kan gatii itti hinbaasiin; maatiin itti hinmadaa’iin hinjiru.
2. ABO’n waggoota dheeraaf miidiiyaa qaba; biyya alaafi keessatti miidiyaaleen amma ONN jalatti walitti qabaan, raadiyoon heddu dhaaba kana jala turan; humna gadi fageeffatee qabaABOn Caasaansaa biyya keessaas walxaxaafi salphaatti kan badu miti. Wayyaaneen waggaa 29f biliyoona itti dhangaalaastee dadhabde.
3. ABO faana hayyootaafi saayntisoota Oromoo ciccimootu duubaan jira; hayyoonni biyya alaafi keessaa mataa qabu jedhaman hundi of ibsuu baatanis ABO faana hojjetaa jiru.
4. ABO’n kaayyoosaatu Oromoof ta’a. Kaayyoo qulqulluudha. Oromon akka hireesaa ofiin murteeffatuuf qabsaa’a. Kun ammoo Oromoon kan barbaadudha.
5. ABO n #Qeerroo Bilisummaa Oromoofi WBO ijaaree qabsoo finiinsaa ture; kanaanis seenaa qabsoo biyya sanaa keessaatti lakkoofsa 1ffaarra jira.
6. ABOn hamma Oromoon lafa kana gubbaa jirutti hinbadu. Paariin dhalatee bade hedduudha. Fakkeenyaaf, ODF ABO keessa ba’eee burjaaja’ee du’e; maqaa ABO tiin dhaabni lamaan tokko ka’ee innis badee barbadaa’eera. Amma ABOn hafe ABO abbaa ejjennoofi cichoominaati.
Kanaafuu, dhaabbileen xixiqqoon callisaniituma maqaaf maallaqa barbaachaaf dhaaba bibixxilan sana dhaabanii qoochoo ABO jalatti walitti qabamanii qabsoo kanatti xumura gochuu qabu.
#ABOn qabsoo ammayyaa kana faana walsimsiisee milkiin xumuruuf maal gochuu qaba kan jedhummoo yaadakoo nanbarreessa.